KU DHUFO GEEDKA TUFAAXA: CALAAMADAHA WAXYEELLADA, MACNAHEEDU YAHAY IYO DAROOGADA SI LOOLA DAGAALAMO - GEED GEEDEEDKA
Sida loola dhaqmo qolofta tufaaxa
Kabuubku waa cudur caadi ah oo saameyn kara geedo tufaax ah. Aad ayay u adag tahay dadka degan xagaaga si ay ula qabsadaan cudurkaan, laakiin waa suurtogal. Maqaalka waxaan ku siin doonaa talooyin wax ku ool ah iyo talooyin wax ku ool ah oo ka soo jeeda beeralay khibrad leh oo siin doona aqoon ku saabsan sida looga takhaluso qolofka.
Waa maxay khatarta iyo meesha ay ka timaado
Geeduhu waxay u dhinta si aad u dhif u ah xayawaanka cufan, laakiin marwalba marwalba way jirtaa. Miraha waa la qabsadaa, noqdaan kuwo yaryar. Waxaa jira ficillo aan lahayn nafaqooyin iyo fitamiino iyaga ka mid ah. Waxa la yidhaahdo oo ku saabsan dhadhanka iyo xaaladda ilaalinta. Dhirta Apple ma u dulqaadanayo dhaxan xilliga qaboobaha, iyo dhirta ayaa lumiya soo jiidashada.
Wakiilka keena cudurkaan waa fungus marsupial. Waa caadi in cimilada diirran, gaar ahaan jecel yahay guga qoyan iyo qabow, maaddaama xaaladahan oo kale u ogolaanayaan khilaafaadka in ay horumaraan. Cagaarka dhirta miraha ee saameeyeen ayaa si muuqata u muuqda, horumarka midhaha waa mid aan simanayn. Waa muhiim in tufaaxu lumiyo dhadhanka aan ahayn sanadka hadda, laakiin sidoo kale 2-3 sano ee soo socota.
Waa muhiim! Xakamaynta qolofta waxay u dulqaadanaysaa xaalado xun. Waxay ku sii jiri karaan illaa xilliga xiga ee soo socda, iyagoo ku jira caleemaha dhacday iyo miisaannada dhoobada inta lagu jiro xilliga qaboobaha.
Sida ugu fudud ee ay saameyn ugu yihiin caleemaha da'da yar. Tan waxay badanaa dhacdaa bilowga Maajo. On caleemo bilowga ah waxaa jira baro iftiin ah oo aan mar kasta la dareemin. Waqti ka dib, dusha sare ee dhibcahani waxay u muuqdaan midab khafiif ah oo bunni ah. Pedicel iyo ugxansiisku si tartiib tartiib ayey u saameynayaan. Caleenta ayaa laga yaabaa inay xitaa qallajiso oo ay dhacdo. Si toos ah on miro, cudurku wuxuu muujiyaa laftiisa qaab ah wareegsan wareegsan madow adag. Dharka oo tufaax ah ayaa jabin kara.
Kahortaga cudurku waa inuu bilaabo dayrta oo sii wadaa guga. Si haboon iyo ugu muhiimsan, daryeelka wakhtiga ah ee miraha miraha waxay ka caawineysaa ka hortagga cudurka ama, xaaladaha ba'an, si weyn u yareeyo saameynta xun.
Ma taqaanaa? Garsooraha mudada jiritaanka jiritaanka Yurub wuxuu noqon karaa sawirka "Cuntada Emaus" Caravaggio, oo ku qoran 1601. Sawirka wuxuu si cad u muujinayaa sambal ah miro. On the tufaax, taas oo lagu muujiyey halka, dabeecada waxyeello ee qolof waa si muuqata.
Waa lagama-maarmaan in la bilaabo tallaabooyinka ka hortagga xilliga dayrta. Tallaabada ugu horreysa waa in la xoqo oo laga saaro caleemaha dhicisoobay, laanta iyo miraha goobta. Intaa waxaa dheer, waxaad cirifka ka dhigi kartaa geedaha, sababtoo ah waxay fungus jiilaalka. Kalluunkani wuxuu u baahan doonaa in lagu nadiifiyo iyadoo la isticmaalayo xalka barafka sulfate ama cadaan. Later waxaa lagama maarmaan ah in la qodo ciidda xagjirka ah, si aysan khilaafyada ufixin xaaladaha wanaagsan ee naftooda.
Waxaa sidoo kale muhiim ah in la ilaaliyo beerista agrotechnik habboon ee dhaqanka tufaaxa. Iyadoo la tixgelinayo in xariiqa nabaradu ay si fiican u koraan xaaladaha qoyaanka oo kordhay iyo marka beerta ay ka sii yaraato, geedaha waa in si ula kac ah loo beeraa. Dhirta Apple waa inay ku koraan meel ay ku jirto qiyaasta ku filan ee qorraxda. Waqti ka waqti waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo nadaafada nadaafadda geedaha beerta.
Waxaa habboon in la ogaado in xaddi badan oo bacriminta lagu dabaqay geedka hoostiisa, ama dariiqa, maqaayad la'aanta waxay saameyn doontaa faafitaanka cudurka. Sida qiyaas ka hortag ah, waxaa suurtogal ah in lagu buufiyo geedo tufaax leh "Agat-25K" badeecada bayoolojiga, waa la ogol yahay in tan la sameeyo xitaa inta lagu jiro xilliga sii kordhaya. Waxaad samayn kartaa dareeraha beerta Bordeaux (1%), laakiin tani waa in la sameeyaa ka hor inta aan ubaxyada Bloom. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, nidaamka noocan oo kale ah ayaa dib loo bilaabi karaa kadib markii tufaaxu hoos u dhaco.
Sida loo dagaalamo
Haddii qolofta ay weli muuqato tufaaxa, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sida loola macaamilo.
Daaweynta qolofta Apple waa la sameyn karaa iyadoo la adeegsanayo hababka dhaqameedka:
Xalka lalabada. Qalabkan waxaa loo isticmaali karaa in lagu beero dhirta beerta dhowr jeer xilli ciyaareed: inta lagu jiro mudada koollada cagaaran, geedi socodka geedka, ka hor inta aanu geedku bilaabin inuu midho u dhasho, iyo sida ugu dhakhsaha badan ee fruiting bilaabmaa. Si aad u diyaarsato xal khardal ah, waxaad u baahan doontaa 80 g oo ah budo khardal ah 1 baaldi biyo ah.
Xalka salineed. Qalab noocan oo kale ah ee qolofta tufaaxa waxtar ma leh. Xaqiiqdu waxay tahay in milixdu dib u riixi karaan bilawga xilliga billowga ah ee geedaha tufaaxa, taas oo la xidhiidha taas oo aan saameyn ku yeelan qolofta. Moobeylka dhirta waa in la sameeyaa horraanta gu'ga, halka geedku uu weli yahay nasasho. 1 baaldi biyo ah qaado 1 kg oo cusbo ah.
Faleebo fuushan. Faleebo Tani waxay ku caawin doontaa haddii aad isticmaasho ka dib markii caleemaha Bloom. Waa tallaabo ka hortag ah. Waxaa lagama maarmaan ah in la buuxiyo baaldi 1/3 oo ka mid ah moofada, ku dar biyo iyo ku adkeyso saddex maalmood.
Ma taqaanaa? Tufaax macaan oo macaan leh ayaa ka kooban bir birta, taas oo awood u leh in ay kordhiso hemoglobin ee dhiigga. Waxa kale oo soo socda waa cusbooyinka magnesium iyo potassium, taas oo lagama maarmaan u ah shaqada caadiga ah ee muruqa wadnaha.
Diyaargarasyo ​​kiimiko ah oo loogu talagalay xayawaanka geedaha tufaaxa ah ayaa la doortaa iyadoo ku xiran waqtiga sanadka. Tusaale ahaan, ka hor xilliga jiilaalka iyo horraanta gu'ga, sunta xooggan ayaa la isticmaalaa, laakiin ka dib marka ubax iyo muddada uu jirey marka beerta ay midho dhaleyso, diyaargarowga waa in la isticmaalo.
Dayrta, ugu dhakhsaha badan ka dib markii caleemaha dhaco oo midhaha laga soo ururiyo, waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo geedo tufaax leh xal copper sulfate, ku salaysan xisaabinta 1 litir oo biyo ah - 3-5 g oo ah naxaas sulfate.
Hababka bulshada ee wax ka qabashada aphids, quraanjka, baradhada barafka ee Colorado, haramaha, duqsashada basasha, dabacasaha dabacasaha, slugs mararka qaarkood ma ahan kuwo ka liita waxtarka kiimikada, iyo waxyeelladu aad bay u yar tahay.
Guga hore, hubi, ka hor inta uusan ubbooyinku bilaabin si toos ah, waxaa lagama maarmaan ah in la tufaaxo tufaax la isku daro Bordeaux (3%). Haddii dhirta aysan lahayn qolof, markaa sida qiyaasta ka hortag ah ayaa lagu buufin karaa saddexdii sanoba mar.
Qiyaastii 2-3 toddobaad ka dib marka ubaxu hoos u dhaco., fangasidaha jilicsan waa in lagu dabaqo iyaga. Kuwaas waxaa ka mid ah "Chorus", "Rajok", "Skor".
Tixgelinta taas qolofka ayaa awood u leh in la isticmaalo si walax firfircooni ah, fangaska ayaa u baahan in la beddelo. "Strobe", "Zircon", "Kuprazan", "Fitolavin" iyo kuwo kale oo badan ayaa ku habboon.
Waxyaabaha kale carrada hoosteeda geedo tufaax ah xilliga dayrta wuxuu daadin karaa 10% xal of nitrate ama HOL.
Waa muhiim! Geedka miro ayaa yareyn doona cudurada fungal, haddii ay tahay fosfooraska ku filan iyo potassium, iyo haddii aysan jirin xad-dhaaf ah nitrogen.
Noocyo iska difaac ah
Xulo wanaagsan oo kaa caawin karta inaad iska ilaaliso dhibaatadan sida qolofta waxay noqon doontaa xulashada iyo beeritaanka noocyo kala duwan. Laakiin halkan waa in la xusuustaa in noocyada kala duwan ee xaaladaha jawi kala duwan ay u dhaqmi karaan si kala duwan. Waxaa jira noocyo aan guud ahaan saameyn karin qolofta. Waxaa jira kuwa daciif ah. Waxaana jira kuwa kuwaas oo had iyo jeer ku dhaco jirro xanuun aan fiicneyn.
Dhirta cagaaran ee gabi ahaanba u adkeysan kara qolofta: "Jonathan", "Ligol", "Pepin Saffron", "Orlovy", iwm.
Noocyada ay ku jiraan xaalad dhif ah: "Orlik", "Welsey", "Antonovka Zolotaya", "Mleevskaya Beauty", "Lobo", "Anis Scarlet", "Renet Kursky", iwm.
Dhirta Apple, kuwaas oo aad u nugul in ay qolof ah: "Papirovka", "Snow Calvil", "Melba", "Rennet Semerenko", "Borovinka" iyo kuwo kale.
Sida aad u arki karto, dagaalka lagaga hortago qolofta waa mid dhab ah. Macluumaadkan, waxaad ka ilaalin kartaa beertaada tufaaxa ee cudur aan fiicnayn iyo inaad soo ururiso wax soo saarkeeda qaali ah oo dhadhan fiican leh sanad walba.
Dhibaatada marka ay sii kordheyso geedka tufaaxa wuxuu noqon karaa aphid iyo quraanjada, Aboorka codling, shchitovka, caleen-caleen, Baalallay.